भुईँचालोको ४ वर्ष : ओतलाग्ने ठाउँ अझै छैन, अनुदान लिनै झन्झट !::Nepali News Portal from Nepal
भुईँचालोको ४ वर्ष : ओतलाग्ने ठाउँ अझै छैन, अनुदान लिनै झन्झट !
पोखरा, १२ वैशाख – भुईँचालो गएको ठ्याक्कै ४ वर्ष पूरा भयो । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रदेशको बारपाकमा यतिबेला रंगीचङ्गी घर ठडिएका छन् । लाप्राकमा पनि घरहरु बन्दैछन् । गाउँभन्दा माथि सारिएको बस्तीमा गाउँलेहरु सर्न पाएका छैनन् । गैर आवासीय नेपाली संघ ( एनआरएन) ले निर्माण गरेको एकिकृत बस्ती पनि मौलिक छैन । मौलिकता फरक कुरा ! भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माणले गति भने लिएको छैन । यहीबीच देशका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बने । ‘इपिसेण्टर गोर्खा’ गण्डकी प्रदेशमा प¥यो । तर, आंशिक र पूर्णगरी दुईवटा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले भूकम्प पीडितलाई कुनै रकम छुट्याएन । भूकम्प पीडितको दायित्व संघीय सरकारमातहतको पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै सुम्पियो ।
नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार गोर्खामा भूकम्पबाट कुल ७४ हजार ३ सय ८९ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये ६५ हजार ३ सय ७० घर लाभग्राहीको सूचिमा थिए । तर अहिलेसम्म ४४ हजार ९ सय ३१ घरमात्र बनेका छन् । बाँकी घरहरु बन्दैछन् । गोर्खा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको सूचिमा परेको छ । त्यहाँका ४७ हजार ७ सय ३५ धुरीले अनुदानको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार लमजुङमा १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही थिए । लमजुङमा ८ सय ५६ घरमात्र ठडिएका छन् भने ९ हजार ५ सय ३६ घर बन्दै छन् । तेस्रो किस्ता २ हजार ३ सय ४१ जनाले मात्र लिएका छन् । तनहुँमा ११ हजार ३ सय १९ घर बन्दै छन् भने ६ हजार ३ सय ५४ घरको निर्माण सकिएको छ । तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही ३ हजार ८ घरधुरी मात्र छन् । नवलपुरान ८ सय १ घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ४ सय ५ घरधुरी अनुदान सम्झौता भएको छ भने ८ सय ७० वटासँग पहिलो चरणको सम्झौता भएको थियो ।
बागलुङमा २ हजार ९ सय ६१ अनुदान सम्झौता गरेका थिए भने १ हजार २३ घर निर्माणको क्रममा रहेका छन् । घर निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको रेकर्ड भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छैन । यहाँ २ हजार ३ सय ७५ घरधुरीले पहिलो किस्ता बुझेका थिए भने तेस्रो किस्ता बुझ्नेहरु ५ सय ९५ घरधुरी मात्र रहेका छन् । .कास्कीमा हालसम्म २ सय २४ घर बने भने ५ हजार ६ सय २० घर बनउाने सम्झौता भएकोमा २ हजार ८ सय ३७ घर बन्दैछन् । तेस्रो किस्ता लिने ३ सय ५० घरधुरी मात्र रहेका छन् । स्याङ्जा बन्दै गरेका ४ हजार २ सय ९७ घर र हेको र ७ सय ७ घरको निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । घर बनाउन अनुदान सम्झौता भने ८ हजार ४ सय ५० घरधुरीसँग् भएको थियो । यता म्याग्दीमा २ सय ९५ घर बन्दै गरेको र एउटा घर पनि सकिएको छैन । घर बनाउने सम्झौता भने ७ सय ८४ घरधुरीसँग भएको थियो । पर्वतमा ४ हजार ९ सय ८ घरको लागि अनुदान सम्झौता भएकोमा एक सय घर बनेका छन् भने २ हजार ९५ घर बन्दैछन् ।
घर बनाउन किन ढिला त ? पुनर्निर्माणमा खटिएकी इञ्जिनियर रक्षा श्रेष्ठ भन्छिन्,‘तोकिएको मापदण्डमा केही फरक परेकोले धेरै घरहरु सिफारिसबाट रोकिएका छन्,‘प्राधिकरणको नियम र मापदण्ड एकातर्फ छ, गाउँलेको समस्या र बाध्यता अर्कोतर्फ भएपछि हामी पनि अन्यौल परेका छौं ।’
यता, सेवाग्राहीको गुनासो भने फरक छ । ‘आफूले बस्ने घरै नभएपछि दुःख जेला गरेर बनाएको घरलाई अहिले मापदण्ड नपुगेको भनेका छन्’ बडिगाड गाउ“पालिका ५ का गणेश थापाले भने, ‘चरा मुसाले त घर बनाएर बस्छ, हामी चार बर्ष सम्म खुला आकासमा बसौं त ? ’ उनले बनाएको घरमा किस्ता पाउन आनाकानी भएको टिप्पणी गरे । प्राधिकरणले पटक पटक फेर्ने प्रावधान र अनुदानको किस्ता बितरणको कठिनाईले पिडितहरु अझै पीडित बनिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
यता, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने देशभर ७ हजार ५ सय ५३ वटा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको लक्ष्य लिएको थियो । तीमध्ये ४ हजार १ सय ७२ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने बाँकी २ हजार ५ सय ६ वटा विद्यालय बन्दैछन् । सुरुवाती आँकडामा भूकम्पले गण्डकी क्षेत्रका ४ हजार ४ सय ५१ कक्षा कोठामा पूर्ण क्षति भएको तथा ५ हजार २८ कक्षा कोठामा आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क रहेको थियो । तीमध्ये स्थानीय र गैरसकारी संस्थाको पहलमा धेरैजसो विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई आधार मान्ने हो भने पनि गण्डकी प्रदेशमा अझै केही सम्पदाहरु निर्माणाधीन रहेका छन् । गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको क्रममा छ भने मनकामना मन्दिरको जिर्णोद्धार सकिएको छ । भूकम्पले देशभरका ७ सय ५३ वटा साँस्कृतिक सम्पदा ढलेका थिए । भूकम्पपछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पिडिएन) अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३ सय जना घाइते भएका थिए । भूकम्पलपे ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन र १९ हजारभन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए ।